भारी बोक्ने बालबालिका भन्छन्-‘भोको पेटले कसरी विद्यालय जानु !’ – इन्सेक
भारी बोक्ने बालबालिका भन्छन्-'भोको पेटले कसरी विद्यालय जानु !'
दार्चुला ०७३ फागुन १ गते
कालो पाइन्ट । निलो र्सट । हँसिलो अनुहारभित्र निराशाको बादल मडारिइरहेको स्पष्टै देखिन्छ । गार्‍हो भयो भन्न सक्दैनन् । तर, हाउभाउले त्यसै भन्छ । झिसमिसे मै डेढ घण्टाको उकाली । उज्यालो भएपछि दुई घण्टाको ओरालीको यात्रा । आर्थिक जोहो गर्नुछ । कापी कलम किन्नु छ । भोको पेट भर्न दिनहुँ भारी बोक्नैपर्छ । कोहीको पिठ्यूँमा डालचीनका भारी । कोहीका पिठ्यूँमा दाउराको भारी । उकाली ओराली चिप्लो भिरालो बाटोको यात्रा । विद्यालय जानु भन्दाअघि घर खर्च जुटाइसक्नुपर्छ । रुन्चे हाँसोमा भन्छन् -'भारी नबोक्ने हो भने, खोक्रो विद्या कसरी सिक्ने ? भोको पेटले केलाइ स्कुल जाने ?'
रानिशिखर-५ का १४ वर्षीय सुरेशसिंह ठगुन्ना र सात वर्षीय जनक ठगुन्नाले बुवा गुमाएको तीन महिना भयो । दुवै दाजुभाइको दैनिकी यसैगरी भारी बोकेरै चलेको छ । जेठि दिदी विवाह गरेर सकिन् । घरमा साहारा आमा कौशीला ठगुन्नाको उमेर ढल्किइसक्यो । 'कापी कलम किन्न र घर खर्च चलाउन भारी नबोकी सुखै छैन ।'-सुरेशले भने । 'दुवै दाजुभाइ बिहानै जङ्गलमा जान्छौँ र दुई घण्टा लगाएर गोकुलेश्वर बजारमा विक्री गरी कापी कलम र खाद्यान्नको जोहो गर्छौँ ।' सुरेश गाउँकै मालिकार्जुन मावि काडापारीको विद्यालयमा कक्षा ६ मा पढ्छन् भने भाइ जनक कक्षा दुईमा पढ्छन् । तीन महिना अघि हृदयघातका कारण अस्पतालमै बुवाको ज्यान गएपछि दाजुभाइको विद्यालय यात्रा कठिन बनेको हो ।
बुवाको मृत्युपछि अहिले उनीहरू पढाइ भन्दा घर धन्दामा जुटेका छन् । 'भारी नबोके सुखै छैन'-सुरेशले भने-'हामीले काम नगर्ने हो भने हातमुख जोडिँदैन । न त कापी कलम नै हुन्छ । एक्लैले बोकेको पैसाले दुवैको खर्च चलाउन नसकिने भएपछि दाजुभाइ नै भारी बोक्दैछौँ ।' रानिशिखरबाट गोकुलेश्वर पुर्‍याएर डालचीन विक्री गरेबापत प्रतिकिलोग्राम ३७ रुपियाँ पाउने उनले बताए । 'विद्यालयबाट घर फर्केपछि जङ्गल जान्छौँ ।'-उनले भने-'बेलुकी घरमा ल्याएर राख्छौँ । बिहानै गोकुलेश्वरमा पुर्‍याएर विक्री गर्छौँ ।' डालचीन विक्रीबापत आएको पैसाले कापी कलम र खाद्यान्नको जोहो गर्ने गरेको उनले बताए ।
उनीहरूसँग इन्सेक प्रतिनिधिको भेट हुँदा निधारको पसीना पुछ्दै मुसुक्क मुस्काए । विद्यालय पोशाकमा भारी बोकिरहेका दुवै दाजुभाइले एकै स्वरमा भने-'कापी कलम किन्न भारी बोक्दैछौँ ।' 'घरमा यिनका आमा काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।'-स्थानीय लालसिंह ठगुन्नाले भने । घरको साहारा कोही नभएपछि विद्यालय जानै छाडेर पनि उनीहरू भारी बोक्न बाध्य छन् । त्यसो त घरमा आमाबावु भएकाहरूलाई समेत विद्यालय भन्दा पनि घरको काममा बढी लाग्नुपर्ने बाध्यता छ । रानिशिखर-५ कै ११ वर्षीया नरमा धामी कक्षा ५ मा विद्यालय भर्ना त भइन् तर विद्यालय कमै जान्छिन् । दुई महिना अघि घरमा बुवाले घर बनाउन सुरु गरेपछि उनी गिट्टी बालुवा बोक्ने काममा व्यस्त छिन् । उनी दुई महिनादेखि विद्यालय गएकी छैनन् । जङ्गलबाट दाउरा ल्याउँदै गरेको अवस्थामा भेटिएकी उनले सुनाइन्-'बावाममी घरमा काम गर्न सघाउ भन्नुहुन्छ । कति बेला पढ्ने ? त्यो भन्दा त स्कूल नजानु नै वेश !' उनले भनिन्-'मैले मात्र हैन, दिदीलेसमेत कक्षा १० मै विद्यालय जान छोडेकी छन् ।'
मालिकार्जुन मावि काडापारी रानिशिखरका प्रधानाध्यापक धनन्जय विष्टका अनुसार यहाँका अधिकांश बालबालिकाहरू बालश्रममा छन् । विद्यालय पढ्नु भन्दा पनि घरको काममा बढी व्यस्त हुनुपर्ने उनीहरूको बाध्यता छ । नियमित विद्यालय नआउने, बालबालिका विद्यालय पठाउँ भन्दा पनि अभिभावकले ध्यान नदिँदा यहाँ बालश्रम व्याप्त भएको उनले बताए । बालश्रम गराउन नपाइने भएपनि आर्थिक अभाव, गरिबीका कारण घरबाट समेत काम गराउनु बाध्यता छ । बाल सञ्जाल रानिशिखरका अध्यक्ष जनकराज भट्टले गाविसमा बढ्दो बालश्रम, बालविवाह रोक्नको लागि गाउँ अभियान चलाइरहेको बताए । उनले भने-'हामी सबै सरोकारवाला सहयोग मागिरहेका छौँ गाविसलाई बालमैत्री घोषणाको लागि अभियान थालेका छौँ ।'
बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धी १९८९ तथा नेपालको संविधानले बालबालिकालाई जोखिममा लगाउन नहुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ३९ को ४ मा कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाइने छैन भन्ने उल्लेख छ । यस्तै बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८ तथा बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन २०५६ ले कुनै पनि बालबालिकालाई बालश्रम र जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
बालश्रम गरिरहेका बालबालिका र विद्यालय नियमित जान नसकिरहेका विद्यार्थीहरूको लागि गरिने कार्यक्रमहरू यस्ता प्रभावित क्षेत्रमा हुनु जरुरी छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय दार्चुलाका सूचना अधिकारी रामदत्त भट्ट भने विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको लागि विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउँछन् । यसरी आर्थिक अभावका कारण विद्यालयको पढाइ नियमित गर्न नसकेका, तथा बालश्रमका कारण पढाइ प्रभावित भएकाहरूको लागि समयमै सरोकारवाला निकायको ध्यान जानु जरुरी छ ।